Ndinogona here kutora mishonga yemakemikari ndiine pamuviri? Nhungamiro yevanotarisira amai - Dzidzo Yehutano | Chikunguru 2021
Dhinda Info Info, Nhau Kambani, Iyo Checkout Kambani, Info Info Hutano Dzidzo, Hutano Zvinodhaka Info Nharaunda, Kambani Zvinodhaka Vs. Shamwari Wellness Nhau Info Info, Hutano Dzidzo Kambani, Hutano Dzidzo Kambani, Nhau Zvipfuwo Hutano Dzidzo, Zvipfuwo
Kuru >> Dzidzo Yehutano >> Nhungamiro yako yekutora mishonga yemakemikari uine nhumbu
Nhungamiro yako yekutora mishonga yemakemikari uine nhumbu
Vanopfuura mamirioni makumi mashanu emaAmerican vanotambura nehutachiona gore rega rega, zvinoenderana neCentre for Disease Control and Prevention ( CDC ). Muchokwadi, allergies ndiyo yechitanhatu inotungamira yechirwere chisingaperi muU.S.
Chii chimwe, Kubata pamuviri dzimwe nguva kunogona kuita kuti allergy zviratidzo zviwedzere . Muviri wemukadzi wese wakasiyana, uye nhumbu dzese dzakasiyana, saka hazvigoneke kufanotaura chaizvo kuti allergies ingabata sei mukadzi akazvitakura.
Asi kazhinji, vakadzi vane nhumbu vanogona kusangana nezvimwe zvinotevera zviratidzo zvakasiyana nevamwe vanorwara nehurwere:
Kubata mahormone kunogona kukonzera kuti mukati memhino dzako kuzvimba. Izvi zvinokonzeresa kuzara kwemhino uye mhino inomhanya.
Iko kusanganiswa kwakasimudzwa kunoita kuti mwaka wekurwara nezviratidzo uwedzere.
Kuunganidzwa kwakanyanya kunogona kukonzera kushushikana kwakashata uye husina kunaka kurara mhando.
Kana iwe uri kutarisira uye uchirwara nezviratidzo zvakaita seizvi, hezvino izvo zvaunoda kuti uzive nezvekutora mishonga yekurwisa muviri uchiri nepamuviri.
Dzivisa imwe mishonga yemishonga kana uine pamuviri
Kune akatiwandei emishonga isina kuchengetedzeka kutora panguva yekuzvitakura. Kutanga pakati pavo ndevomumuromo decongestants.
Oral decongestants Ciara Staunton, mukoti wezvemhuri uye muridzi we Staunton Primary Kuchengeta muCincinnati. Zvisinei, Yakasungwa (pseudoephedrine) , iyo yakavharirwa kuseri kwekambani yemishonga, inogona kushandiswa mune yechipiri neyechitatu trimesters mumadzimai asina hypertension.
Asi Staunton anonyevera izvozvo Yakasungwa-PE (phenylephrine) , iyo yeku-the-counter sarudzo, haifanire kutorwa panguva yekuzvitakura. Izvo hazvishande pane pseudoephedrine. Asi zvinonyanya kukosha, kuchengetedzeka kwayo kwevakadzi vane nhumbu kunopokana.
Mai Staunton vanokurudzirawo kuti usashandise chero mishonga yemakwenzi panguva yekuzvitakura. MuUnited States nedzimwe nyika zhinji, mishonga yemakwenzi inodzorwa zvishoma uye haina kuongororwa nezviitiko zvakashata.
Maitiro ekurapa zvakachengeteka kurwara panguva yekuzvitakura
Kunyangwe zvingave zvakanaka kudzivisa ma allergenia anokunetsa, izvo hazviwanzo mukana. Vakadzi vazhinji vane nhumbu nevapi vavo vanofarira kutanga nehurongwa husiri hwemishonga pazvinenge zvichibvira. Dr. Janelle Luk, director wezvekurapa uye mushandirapamwe we Chizvarwa Chinotevera Kubereka muNew York City , inoratidza an pamusoro-pe-counter saline nasal spray .
Dr. Luk anokurudzirawo kurovedza muviri kuderedza kuputika kwemhino. Uye zvakare, anoti varwere vane mhino dzakazara vanogona kukwanisa kurara zvirinani kana vakasimudza musoro wemubhedha nemadhigirii makumi matatu kusvika makumi mana nemashanu panguva yekurara.
Nekudaro, dzimwe nguva izvo izvo zvisiri zvemishonga sarudzo hazviite hunyengeri, uye iwe unoda chimwe chinhu chakasimba (aka allergy mushonga) kurerutsa kusuwa kwako. Muchiitiko ichocho, kune akati wandei sarudzo dzakachengeteka kuyedza.
Kuti uve nehuremu hwakadzikama uye hwakanyanya, chiremba wako anogona kukurudzira a nonprescription corticosteroid pfapfaidzo kana iyo muromo antihistamine , Dr. Luk anodaro. Dzimwe sarudzo dzemumhino dzinosanganisira Rhinocort Allergy, Flonase, uye Nasonex.
Nezvemuromo antihistamines, Staunton anoti anokurudzira Claritin (loratadine) kana Zyrtec (cetirizine) nekuda kwechengetedzo yavo yakanaka nhoroondo. Ose ari maviri akaverengwa nhumbu nhumbu B neDFA. Izvi zvinoreva kuti zvidzidzo zvinodzorwa mumhuka hazvina kuratidza mhedzisiro kune mwana ari kukura.
Benadryl (diphenhydramine) inoonekwa seyakachengeteka panguva yekuzvitakura, sekureva kwe CDC . Nekudaro, Benadryl Allergy Plus Kudzivirira hakuna kuchengetedzeka kune vakadzi vane nhumbu nekuti ine phenylephrine.
Ndeupi musiyano uripo pakati pe lyrica ne gabapentin
Iwe unogona zvakare kutora imwe yemumuromo antihistamines pamwe chete neanal spray kana pasina munhu anodzora zviratidzo zvako pachako.
Kana iri subcutaneous allergen immunotherapy (SCIT), aka allergy shots - dai iwe waive pavari usati wabata pamuviri, chiremba wako anogona kuenderera mberi. Asi zvaisazotangwa panguva yekuzvitakura nekuda kwekukuvara kunogona kuitika kana mhinduro ikaitika, anodaro Staunton.
Kana iwe uri kutambura nezviratidzo zvekurwara, taura nemupi wako nezvezvaunogona kuita zvemushonga wekurwisa paunenge uine pamuviri.
Chii chinoreva ruvara rwemishonga?
Maitiro ekutsanangura mhedzisiro pasina kuvhundutsa varwere
sei kubvisa mbiriso hutachiona kuvaviwa
ndeupi musiyano uripo pakati pe novolog uye humalog insulin
mazita evasuruvara ekuzorodza ekurwadziwa kwemutsipa
unogona kupi kutenga nebulizer muchina
Mangwanani anotevera piritsi rinogara kwenguva yakareba sei